Isasasa ngomdlalo wamaciko webhola - Ilanga News
Home Izindaba Isasasa ngomdlalo wamaciko webhola
Isasasa ngomdlalo wamaciko webhola
UBig Zulu uthi lokhu kuzosiza ukulekelela abantu abantulayo
AMACIKO e-hip hop ahlule akamaskandi ngo-5-3 wamaphenathi emdlalweni wawo kanobhutshuzwayo. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
UQUBULE isasasa nasema-cikweni ezinye izinhlobo zomculo – afuna ukuba yi-ngxenye yawo – umdlalo kanobhutshuzwayo obuphakathi kwaciko e-hip hop nawakamaska-ndi obungoLwesibili ebusuku eSandton, eGoli.
Lomdlalo unqotshwe ngeze-hip hop ngo-5-3 sekukhahlelwa amaphenathi emuva kokuba umdlalo ubuphele kuwu-2-2.
Ngalo mdlalo, amaciko athi afisa ukuqongelela ukuze akwazi ukuphonsa itshe esivivaneni kwaba-ntulayo njengoba kubhoke indlala ngenxa yokuphela kwemisebenzi okufike neCovid-19.
Lokhu kuvezwe nguSiyabonga “Big Zulu” Nene, otshele ILANGA ukuthi bangajabula uma kungenzeka kusondele abaxhasi, ngoba ba-nesifiso sokubuyisela emphakathini.
Uveze ukuthi nakuba inhloso yabo enkulu yokusungula lo mdlalo bekuwukuthi kwakhiwe ubu-mbano, kodwa sekuqhamuke nalo mbono wokusiza abaxakekile.
Uthi ukuthakaselwa kakhulu ko-mdlalo wabo, sekwenze ukuba ba-cabange ukusondeza namaciko eminye imikhakha.
“Lo mdlalo siwuhlanganise isi-gubhukane noKhuzani (Mpungose). Empeleni benginenkinga yokuthi u-brentwood wami ubungasangili-ngani ngenxa yomkhaba, nganquma ukuyodlala ibhola kanti uKhuzani uzongibona ezinkundleni zo-kuxhumana ngiveze izithombe zami, ngilungiselela ukuyojima enkundleni, wangiphonsela inselelo, wathi naye uyajima nezinye izi-nsizwa ePretoria, uyafuna sidlale ngolunye usuku.
“Sihlanganile-ke eThekwini kwe-linye lamahhotela saxoxa ubuso nobuso, saqhamuka necebo loku-thi le nto masiyenze kube ngeyamaciko ngokwehlukana kwemikha-kha ukuze sakhe ubunye,” kusho uBig Zulu.
Uthi unethemba lokuthi uku-hlangana kwabo kuzobasiza esi-khathini esizayo nakwezinye izi-ngqinamba ababhekana nazo endimeni yezobumnandi.
Utshele ILANGA ukuthi umdlalo uzoqhubeka ngoba amaciko e-gospel, ama-piano nawe-kwaito, afuna ukungena.
“Abafowethu bakhombise utha-ndo kakhulu, bawemukela ngeza-ndla ezimhlophe umbono ebengi-qhamuka nawo kanti nakumasika-ndi bakhombise ukweseka kakhulu, saba munye ngaphandle kwezihibe.
“Isifiso sami esikhulu wukuthi le nto ingabi ngami noKhuzani, ko-dwa kumele ivuleleke, bangene bonke omasikandi abafisayo,” ku-sho uBig Zulu.
Imizamo yokuthola uKhuzani iphunzile. Omaskandi bebebo-phele uJaivazimnike, uQhosha, uNjoko, uNtencane, iNkosi Yama-gcokama, uNgelo V nabanye kanti i-hip hop ibigadla ngo-AKA, Kwe-sta, uSho Madjozi, uDonald, uReneilwe Letsholonyane, uKid X, uSjava, uRicky Rick nabanye.
Previous articleIPirates enkingeni yokulimala kwabadlaliIPirates enkingeni yokulimala kwabadlali
Next article“Kwakungeke kusize ngalutho ukwesula”